Pacific-AA Online Shop | Daily Vitagin Detail
UOM: Box of3x 10s Capsule
ကုန်ခန်းစွမ်းအင် ပြည့်ဝချင် နေ့စဉ်သောက်ပါ "ဒေလီဗိုက်တာဂျင်"
• Daily Vitagin တွင် ပါဝင်သော ဗီတာမင်မျိုးစုံနှင့် သတ္တုဓာတ်များ၏ ပေါင်းစပ်စွမ်းအင်ကြောင့် ကုန်ခန်းသွားသည့် စွမ်းအင်များကိုချက်ချင်း ပြန်လည်ပြည့်ဝစေပါသည်။
• ကုန်ခန်းသွားတဲ့ စွမ်းအင်များကို ဖြည့်တင်းဖို့ Daily Vitagin ကို နေ့စဉ်သောက်သုံးခြင်းဖြင့် Daily Vitagin မှာ ပါဝင်တဲ့ စွမ်းအားများကြောင့် အားအင်ပြည့်ဖြိုးတဲ့ လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။
• အသက်(၁၂)နှစ်အထက် တစ်နေ့လျှင်တစ်လုံး သောက်နိုင်ပါသည် (သို့) ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့် အတိုင်းသောက်နိုင်ပါသည်။
ယခုကာလအတွက် Daily Vitagin အထူးလျှော့ဈေး !!!! ဒီ Promotion ကို အိမ်ထဲလုံလုံခြုံခြုံနဲ့ သက်တောငိ့သက်သာ ဝယ်လို့ရအောင် - Pacific AA online ကနေ Promotion လုပ်ပေးမှာပါ။ ခုလိုကာလမှာလိုအပ်နေမယ့် Daily Vitagin အားဆေးကို အထူးလျှော့ဈေး Promotion လေး လုပ်ပေးပါရစေရှင့် July လ (၁၉) ရက်မှ July လ (၃၁) ရက်အထိ ဆေးဘူးသီးသန်.(၁) ဘူးဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် 250 Ks Off လက်ဆောင်ပါ (၁) ဘူးဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် - Get 1 Daily Vitagin Towel (ON PACK) လက်ဆောင်ပါ (၂) ဘူးဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် - Get 1 Daily Vitagin Sport Bag (ON PACK) Delivery ကလည်း Free ဆိုတော့ ကယ် အခုပဲမှာလိုက်တော့ နော်
Korea Ginseng extr 40 mg
Aloe extr 5mg
Vitamin B5 15.3 mg
Ferrous Fumarate 54.76 mg
Magnesium Oxide 66.34 mg
Dibasic Calcium Phosphate 307.5 mg
• ဆရာဝန်၏ကုသမှုခံနေရသော လူနာ
၃ ။ ယေဘူယျ သတိပေးချက်များ
၄ ။ ဆေးသောက်နေစဉ်အတွင်း (သို့မဟုတ် ) ဆေးသောက်ပြီး သတိထားရမည့်အချက်များ နှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး
• ပျို့ခြင်း ၊ အန်ခြင်း ၊ ဝမ်းလျောခြင်း ၊ ယားယံအတွက်ထခြင်း ၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း ၊ ရုတ်တရက်အဖျားတက်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါက ဆရာဝန် (သို့မဟုတ် ) ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့်ပြသပါ ။
• အစားအသောက်ပျက်ခြင်း ၊ ပျို့ခြင်း ၊ ဝမ်းဗိုက်မအီမသာဖြစ်ခြင်း ၊ ဝမ်းသွားခြင်းတို့ဖြစ်စေနိုင်ပါသည် ။
• ဤဆေးသောက်ခြင်းအားဖြင့် ရာသီသွေးဆင်းများခြင်း နှင့် ရာသီသွေးဆင်းမမှန်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်သည် ။ အကယ်၍ သွေးဆက်ဆင်းနေပါက ဆရာဝန် (သို့မဟုတ် ) ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့်ပြသပါ ။
• ဆေးသောက်ပြီး (၁)လကြာပြီးနောက်တိုးတက်ထူးခြားမှုမရှိပါက ဆရာဝန် (သို့မဟုတ် ) ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ပါ ။
၅ ။ ထားသို ကိုယ်တွင်ရာတွင် သတိထားရမည့်အချက်များ
• ဆေးများ၏အရည်အသွေးကို ထိမ်းသိန်းရန်နှင့် ဆေးမှားသောက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်အတွက် အခြားဆေးဘူးနှင့် သိမ်းဆည်းခြင်းမပြုရ ။